पवित्र मोदीवेनीधामलाई असरपर्ने भन्दै स्थानीयव्दारा पुल निर्माणमा अवरोध ! – ebaglung.com
पवित्र मोदीवेनीधामलाई असरपर्ने भन्दै स्थानीयव्दारा पुल निर्माणमा अवरोध !
२०७३ माघ १५, शनिबार ०४:१२	Home Slider, प्रमुख समाचार
माधब पराजुली, पर्वत २०७३ माघ १५ । बहुचर्चीत राष्ट्रिय गौरवको आयोजना उत्तर—दक्षीण जोड्ने कालीगण्डकी लोक मार्गमा पर्ने पर्वतको सदरमुकाम नजिकै मोदीखोलामा निर्माण हुन लागेको मोटरेवल पुलको कार्यमा स्थानीय वासिन्दाले अवरोध गरेका छन् ।
कुल ३ करोड ५० लाख लागतमा मोदीबेनीमा निमार्ण गर्न लागिएको पुलमा स्थानीय बसिन्दाले ऐतिहासिक तथा पौराणिककाल देखि रहेको मठ, मन्दिर, पाटीपौवा र बृद्धाश्रममा समेत क्षेती पुग्ने भन्दै अबरोध गरेका हुन । उनीहरुले उक्त ठाउँमा मोटरेवल पुल निमार्ण कार्यले पुरातात्विक संरचनाहरु ध्वस्त हुने र मोदीबेनी धामको अस्तीत्व समेत समाप्त हुने भन्दै निमार्ण कार्य अगाडी बढन दिएका छैनन । पुलको निमार्ण कार्य शुरु गरेपछी उनीहरुले यथास्थान बाट पुल निमार्ण गर्न नदिने भन्दै प्रस्तावित नक्साङ्कन भएको ठाउँ बाट करिब २०० मिटर पूर्व पट्टी मल्याङ्दी खोला नजिक पुल निर्माण गर्न भन्दै मन्त्रालयमा समेत निवेदन दिएका छन् ।
उक्त पुलको २ बर्ष भित्रमा काम सम्पन्न गर्ने गरि निमार्ण कम्पनी संग सम्झौता गरि काम अगाडी बढाईएको थियो । सो पुलको लम्बाइ १४० मिटर र चौडाइ आठ मिटर रहने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माण कार्यमा स्थानियको विरोध भएपछी पुल निमार्णको लागी टेन्डर परेको लामो समय सम्म पुलको काम आगाडी बढ्न सकेको छैन ।
अहिले बन्न लागेको स्थानमा मोटरेवल पुलले मोदीबेनी धाममा केही असर नगर्ने र विकास निर्माणमा समेत राजनीतिक खिचातानी गर्ने परिपाटीका कारण स्थानियले अबरोध गरेको पर्वत क्षेत्र नं. २ का सांसद विकास लम्सालले बताए । उनले निकै कष्टपुर्ण तवर बाट पुल निमार्णको लागी बजेट बिनियोजन गरिएको र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा स्थानियले बिराधगर्नु निकै दुःख पुर्ण भएको बताए । उनले मन्त्रालयबाट अब फेरि छिट्टै नै डिजाइन परिवर्तनको अनुमति स्वीकृत लिई स्वीकृत भएपछि पुलको निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने जानकारी दिए ।
उक्त ठाउँमा पुल निर्माण सम्पन्न भए लोक मार्गले छोएका तथा नजिक पर्ने दर्जनौँ जिल्लाबासीन्दाहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन । अहिँले कालीगण्डकी लोकमार्ग अन्तर्गत फलेवास—कुस्मा सडक खण्डको ट्रयाक निर्माण गर्ने काम भईरहेको छ ।
एमाले बागलुङको संगठन सुदृढिकरण अभियान खर्वाङमा !